Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ihe ndi Seychelles: Onyinye Obodo 5 ka ha weghachite n’ulo
Njedebe nke njem bụ oge kacha sie ike, mana ịkwesighi ịsị paradaịs ka ị na -ahapụ agwaetiti Seychelles. Agwaetiti a na -enye gị onyinye dị iche iche ị ga -eso ndị ị hụrụ n'anya kerịta ma ọ bụ iji cheta maka mgbapụ gị nke ukwuu.
Site na isi, ruo ihe ịchọ mma, na nka na ihe ndị ọzọ, ọ gaghị enwe ụkọ akụ ga -alaghachi n'ụlọ mgbe nleta Seychelles gasịrị.
Ihe ncheta ndị ejiri aka rụọ nke ejiri aka rụọ nke ọma na-enwe ebe pụrụ iche mgbe niile, na ngwaahịa emere na mpaghara na-eji ihe sitere n'okike.
Ị nweghịkwa ike iji onyinye nke ga -enwe mmetụta na -adịgide adịgide na okpo ọnụ azụ n'ụlọ na -enwe ụdị nri ụtọ dị ka saffron, masala, pawuda, nutmeg, na vanilla.
Isi nke Seychelles
Gaa na oke ohia mmiri jupụtara na aja aja nke agwaetiti ndị ahụ na-ahapụghị ụlọ gị site na ahịrị ndị na-esi ísì ụtọ na-emepụta na mpaghara gị. N'ike mmụọ nke ahịhịa osisi nke Seychelles, ihe nsure ọkụ ndị a ga-arafu gị na vanilla dị ụtọ, lemongrass na-atọ ụtọ na ụda musky na-ekpo ọkụ. A na -emepụta ụfọdụ isi ndị a na ụlọ nyocha kacha arụpụta ihe na -esi ísì ụtọ na mpaghara. Ọ masịrị gị, ndị ị hụrụ n'anya ga -enwe mmasị na -esi ísì ụtọ ndị a wee kpọghachite gị n'oké ọhịa.
Gosi ahụ gị ụfọdụ ịhụnanya na ụfọdụ ngwaahịa anụ ahụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke emere ebe a na paradaịs pristine! N'ịbụ ndị kpuchiri osisi osisi ndị dị egwu, agwaetiti ndị ahụ nwere ọtụtụ ihe eke sitere n'okike, nke agwakọtara iji gboo mkpa anụ ahụ gị niile site na ụdị ndị obodo mepụtara. Ncha ahịhịa na -akpọghachite gị n'ikpere mmiri nke aja ma kpochapụ akpụkpọ gị, yana ọtụtụ ndị na -ete ude nwere ntụpọ nke vanilla na -ekpo ọkụ, nnu mmiri ọhụrụ na citronella dị ụtọ iji nye akpụkpọ gị ahụ ọkụ.
Ọla sitere na Ogige Iden
Agwaetiti Seychelles bụ ebe UNESCO World Heritage Heritage, otu n'ime ha bụ Vallée de Mai, nke a na -akọ na ọ bụ ebe ogige Iden. Ebe mara mma nke dị na Praslin na -akwado ọtụtụ akụ gụnyere nkwụ pụrụ iche nke Coco de Mer, nke na -emepụta mkpụrụ kacha ibu n'ụwa, nke jupụtara n'agwaetiti ndị ahụ. Ị nwere ike igosi ihe a na-amị amị otu site n'isịnye gị otu ma ọ bụ ụlọ abụọ. Inweta aka na Coco de Mer dị mfe karịa ka mmadụ nwere ike iche; Naanị gaa na kiosks dị na Frances Rachel Street na Victoria, Seychelles Island Foundation (SIF) ma ọ bụ Seychelles National Parks Authority (SNPA) wee zụta otu nhọrọ, jide n'aka na ọ na -ebu asambodo ezigbo iji gosi na enwetara ya n'ụzọ iwu. , na enweghị akpa. Gaa na National Biosecurity Agency na Orion Mall, Victoria iji hụ na ịnweghị nsogbu na ọdụ ụgbọ elu. Nkume yiri pelvis nke na-akpali agụụ mmekọahụ-nke ọ bụla dị iche-ga-emerịrị mkparịta ụka gbasara ezumike gị na paradaịs.